News - Ekele anyị 11kv & 33KV dị ugbu a na volta ọkụ na-agafe ule KEMA
KEMA bụ mkpirisi Dutch (Keuring Van Elektrotechnische Materialen). KEMA azụmahịa akporo ji nwayọọ nwayọọ gbasaa, na-aghọ a na-eduga onwe ha ikike na zuru ụwa ọnụ ike ọrụ ụlọ ọrụ. Ruo ihe karịrị afọ 80, KEMA na-enyere ndị ahịa aka ịkọwa usoro mgbanwe ma dozie nsogbu siri ike na ịba uru. Na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịhụ ịdị adị, ntụkwasị obi, nkwado na ịba uru nke ike ụwa na ngwaahịa na usoro metụtara ume.
N'ime ọrụ ọrụ dị iche iche, KEMA na-arụ ọrụ nke injinia, onye na-ahụ maka azụmaahịa, usoro na ọkachamara njikwa mgbanwe. Site oru, management na usoro iwu na atụmatụ na injinia imewe, usoro na arụmọrụ njikarịcha mmejuputa iwu na nwale, wdg Na utility ụlọ ọrụ na-enye keukwu azụmahịa na oru ngwọta.
Isi ụlọ ọrụ KEMA dị na Arnhem, Netherlands, nwere ngalaba na mba 20 gburugburu ụwa. Ruo ihe karịrị afọ iri asatọ, ịdị mma, iguzosi ike n'ezi ihe, ntụkwasị obi na ihe ọmụma ọkachamara bụ isi ụkpụrụ KEMA.
Na 11kv na 33KV voltaji na ndị ntụgharị ugbu a emepụta site na ụlọ ọrụ nrụpụta anyị agafeela ule KEMA wee nweta akụkọ nyocha KEMA.
Anyị bụ ndị na-emepụta ọkụ eletrik na China. Ya mere, anyị niile ngwaahịa na-arụpụtara nditịm na okwu nke ISO9001 & KEMA, na anyị na-mbupụ karịrị 30 countire na ha nwere nnọọ afọ ojuju na anyị mma na mgbe ahịa ọrụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka nsonaazụ KEMA nke nsonaazụ anyị na katalọgụ ngwaahịa anyị.
Anyị na-ele anya igosipụta kọntaktị gị na mmepe ọnụ.